Mareykanka oo Sheegay in Duqeyn uu Ku Dilay Xubno Al-Shabaab Ka Tirsanaa – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Military-ga Mareykanka ayaa sheegay in ciidamadiisa gaarka ah ee Somalia ay fuliyeen duqeyn ka dhan ah dagaal yahanada Al Shabaab oo ku xoogan koonfurta Soomaaliya.
Weerarkan dhanka cirka ah ayaa dhacay arbacadii waxa uuna Mareykanku sheegay inuu ku dilay labo dagaalyahan oo ka tirsan Al Shabaab.
Howlgalka Mareykanka ee qaaradda Africa marka magaciisa lasoo gaabiyana loo yaqaano Africom qoraal lagu daabacay ayaa lagu sheegay in duqeyntan oo qeyb ka ah taageerada uu Mareykanku siiyo ciidamadda dowladda Somaliya ay ka dhacday agagaarka deegaanka Baladul Amin ee gobolka Sh. Hoose.
AFRICOM ayaa sheegtay in Al Shabaab ay hore weeraro uga fuliyeen dhulka baadiyaha ah ee ku hareereysan deegaanka Baladul Amin, waxaana ay weeraradaas kusoo qaadi jireen ciidamada dowladda Somalia iyo dad shacab ah oo ku nool dhulkaasi.
Tan iyo sanadkii 2017 Military-ga Mareykanka ayaa kordhiyey duqeymahiisa ka dhanka ah dagaalyahanada Al Shabab oo weeraro si joogto ah ula beegsado saldhigyada ay dalka ku leeyihiin ciidamada dowladda Somalia iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Africa ee Amisom.